Akụkọ Kwa Afọ - Regwọ Ọrụ --gwọ - ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Akụkọ kwa afọ
E hiwere Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ dịka Òtù Na-ahụ Maka Ọrụ Inyeaka Scottish na 23 June 2014. Anyị na-ahụ maka ọrụ ebere SC044948 na Office nke Scottish Charity Regulator, OSCR. Oge nchịkwa ego anyị na-amalite site na July ruo June kwa afọ. Na ibe a, anyị na-ebipụta Akụkọ Nchịkọta Kwa Afọ maka afọ ọ bụla. Nchịkọta akụkọ zuru oke kachasị dị ugbu a dị na OSCR website na ederede ederede.
Akwukwo akwukwo nke afo 2019-20
E lebara ọrụ anyị anya n'ọtụtụ ebe:
Vingkwalite uru nke ego nke ọrụ ebere site na itinye maka enyemaka na ịtọlite ​​mpaghara ọhụụ nke azụmaahịa azụmahịa.
Relationszụlite mmekọrịta gị na ndị nwere ike ịrụ ọrụ na Scotland na gburugburu ụwa site na ịkparịta ụka n'.ntanet.
Mụbawanye usoro nkụzi anyị maka ụlọ akwụkwọ na-eji usoro sayensị nke ụgwọ ọrụ nke ụbụrụ na otu o si emekọrịta na gburugburu ebe obibi.
Iwulite profaịlụ mba na nke mba nile iji mee ka TRF bụrụ nzukọ 'ịga-aga' maka ndị mmadụ na ụlọ ọrụ chọrọ nkwado n'ọhịa nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị dị ka ụzọ nke ime ka nghọta ọha na eze nwekwuo ike iguzogide nrụgide.
Na-amalite mgbanwe iji mee ka anyị nwekwuo ike ma nwee mmetụta site na iji nwayọ na-emegharị ọrụ anyị. Anyị na-esi n'ụdị nnyefe ihu na ihu gaa n'ụdị iji teknụzụ nkwukọrịta ọgbara ọhụrụ.
Na-agbatị ebe nrụọrụ weebụ anyị na mgbasa ozi ọha na eze iji wuo ụdị anyị n'etiti ndị na-ege ntị na Scotland na gburugburu ụwa.
Ertme ọzụzụ na mmepe iji bulie ọkwa ọkwa nke otu TRF. Nke a ga - ahụ na ha nwere ike ịnyefe iyi ọrụ a dị iche iche.
Ihe ndị mepụtara
Anyị meghachiri okpukpu abụọ ego anyị na-akpata na nke ọhụrụ of 124,066. Anyị nwetara usoro nke usoro enyemaka, gụnyere nke kachasị ukwuu ruo taa.
TRF nọgidere na-enwe ọha na eze na agụmakwụkwọ gbasara mmekọahụ, nchebe na ntanetị na mmata mmata mmata, na-aga nzukọ 7 na ihe omume na Scotland (afọ 10 gara aga), 2 na England (afọ 5 gara aga), yana otu na USA.
N'ime afọ ahụ anyị na mmadụ karịrị 775 (afọ gara aga 1,830) rụkọrọ ọrụ n'onwe anyị. Anyị nyefere ihe dị ka mmadụ 1,736 / awa nke nkwukọrịta na ọzụzụ, ntakịrị ntakịrị site na awa 2,000 gara aga.
Site na Machị 2020 thegwọ Ọrụ weregwọ ahụ akwụsịla ma ọ bụ gbanwee site na ọrịa ahụ na-efe efe. A kagburu akwụkwọ ịkpọ òkù ka anyị kwuo okwu n'ọgbakọ ndị nọọsụ na-eme ihe ike n'ụlọ na Sweden. Ọtụtụ okwu nkuzi na nkuzi ndị ọzọ furu efu.
Ọrịa ahụ gbochiri ego azụmaahịa, n'agbanyeghị na akwụ ụgwọ nke a site na nkwado sitere na Fund nke Resilience Nke Atọ nke Ọchịchị Scotland.
Na ubochi ato na June 2020 anyi gbara ogbako mba uwa nile nke ndi nzuko si na obodo iri abuo na abuo bia. Emeburu nke a dị ka ihe omume ihu na ihu ma ghazigharị ya n'ihi mgbochi Covid.
Na weebụsaịtị anyị www.rewardfoundation.org, ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa pụrụ iche ruru 175,774 (afọ gara aga 57,274) na ọnụ ọgụgụ peeji ndị elere anya ruru 323,765 (site na 168,600).
Maka Twitter na oge site na July 2019 ruo June 2020 anyị nwetara 161,000 tweet, na-agbada ntakịrị site na 195,000 n'afọ gara aga.
Na ọwa YouTube anyị (https://www.youtube.com/channel/UC1-mihcAj9mf-nJKLWiT5KA) ọnụ ọgụgụ nke echiche vidio si na 3,199 na 2018-19 ruo 9,929. Ihe nkwado kachasị si na clip anyị nyere ikike na New Zealand nke Dr Don Hilton kọwara mmetụta porn na ụbụrụ.
Ndị ọzọ rụzuru
N'ime afọ anyị bipụtara 14 blog posts ekpuchi ọrụ TRF na akụkọ kachasị ọhụrụ banyere mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ọha mmadụ. Anyị nwere isiokwu abụọ bipụtara na akwụkwọ akụkọ enyocha ndị ọgbọ, site na otu afọ gara aga.
N'ime afọ TRF nọgidere na-apụta na mgbasa ozi, pụtara na akụkọ 5 akwụkwọ akụkọ na UK na mba ụwa (afọ gara aga 12). Anyị gosipụtara na otu mkparịta ụka redio (site na 6) wee nweta mgbasa ozi dị ugbu a na Nine na BBC Scotland TV.
Mary Sharpe kwụsịrị ọrụ ya dị ka oche nke Kọmitii Mmekọrịta Ọha na Nkwado na Society maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ (SASH) na USA. Oge afọ anọ ya dịka onye otu SASH Board mechakwara.
Site na Jenụwarị 2020 ruo Mee 2020 Mary Sharpe bụ Onye Ọbịa Ọzụzụ na Lucy Cavendish College, Mahadum nke Cambridge.
Onyinye wardgwọ contributedgwọ ahụ nyere nzaghachi maka usoro nke ịmepụta Survey National nke Mmekọahụ na ifdị Ndụ NATSAL-4.
N'ime afọ nke atọ na-agba ọsọ, anyị jigidere Royal College of General Practitioners Accreditation iji nyefee ndị ọkachamara ahụike ahụike otu ụbọchị dị ka akụkụ nke mmemme mmemme ọkachamara na-aga n'ihu. A na-enyefe ụlọ ọrụ CPD na obodo 9 UK (site na 5) na otu oge na Republic of Ireland. E gosipụtara ndị ọrụ nkuzi CPD abụọ ọzọ ndị ọkachamara na USA.
TRF nọgidere na-enyefe ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị na-emerụ ọzụzụ mmụta n'ụlọ akwụkwọ, ndị ọkachamara na ọha na eze. Usoro ihe omume nke imepụta atụmatụ nkuzi banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekọahụ maka ojiji n'ụlọ akwụkwọ abanyela na njedebe ikpeazụ ya, yana ule n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ. Atụmatụ nkuzi izizi gara na ire na ụlọ ahịa TES.com na njedebe afọ.
Ụlọ ọrụ na ọrụ nyere
Anyị nyere ngụkọta nke awa 597 nke ọzụzụ n'efu na ngụkọta nke mmadụ 319. Nke a dị ukwuu karịa ngụkọta nke afọ 230 nke afọ gara aga, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị natara sitere na mmadụ 453. Mgbanwe a gosipụtara ntụgharị jikọrọ abụọ n'ime ọrụ ebere. Nke mbu, anyi enweela ike ikwu maka otutu nkuzi azugara ndi okacha amara na ulo akwukwo, ya mere, meziwanye ego anyi. Anyị nwere ike ime nke a, opekata mpe na akụkụ, n'ihi na a nwalere ma nwalee ihe ndị na-agagharị na afọ gara aga, na-eme ha ngwaahịa ndị ahịa bara uru.
Nke abụọ, anyị mụbara ọnụọgụ ozi nke ozi agbasaara site na mmụba dị ukwuu anyị nwere na ndị na-ege ntị rutere gburugburu Scotland na ụwa site na weebụsaịtị anyị na site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Nzukọ Age Verification Virtual Conference nwere ihe ịga nke ọma na ikwe ka anyị rute ndị ọhụụ.
Anyị nwere akwụkwọ ndị ọhụụ enyochapụtara na 'Akwụkwọ bụ' International Journal of Environmental Research and Public Health '. na 'Mmekọahụ na Mmekọahụ '. Akwụkwọ ndị a nwere ike inyere aka duzie ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ụwa niile n'ime afọ iri na-abịanụ. Ntuziaka ndị nne na nna na-enyefe na Intanet launchedntanetị malitere na 2018-19 sitere na 4 gaa na 8 peeji, na-enweta ihe ọmụma dị mkpa ndị nne na nna na-ejikwa ọnọdụ nrụgide na ụmụ ha.
Akwukwo akwukwo nke afo 2018-19
Anyị na-arụ ọrụ anyị n'ọtụtụ ebe
Imeziwanye ego nke ọrụ ebere ahụ site n'itinye onyinye na ịgbasa ahia azụmahịa
Inwe mmekorita na ndi oru aka na ndi Scotland na gburugburu ụwa site na netwọk
Ịbawanyewanye ihe omume nkuzi anyị maka ụlọ akwụkwọ na-eji ihe omumu sayensi nke circuit circuit of the brain and how it interacts with the environment
Ịmepụta profaịlụ mba na nke ụwa iji mee ka TRF kwadoro 'nzukọ na-aga' maka ndị mmadụ na òtù dị iche iche nke chọrọ enyemaka na mgbasa ozi ịntanetị na-emerụ ahụ dịka ụzọ isi kwalite nghọta ọha na eze maka mgbidi ụlọ nrụgide
Ịgbasa weebụ na mgbasa ozi ọha na eze ka anyị nwee ike ịmepụta akara anyị n'etiti ndị na-ege ntị na Scotland na gburugburu ụwa
Trainingme ọzụzụ na mmepe iji bulie ọkwa ọkwa nke ndị otu TRF iji hụ na ha nwere ike ịnyefe iyi ọrụ a dị iche iche.
Anyị mebiri okpukpu abụọ anyị na-akpata karịa £ 62,000, nweta ego kachasị enyere anyị aka ma nọgide na-eme ka ego anyị na-enweta.
Anyị mechara 'ego itinye ego n'echiche' site na nnukwu ego lọtrị. Ejiri nke a iji zụlite ma nwalee ihe ọmụmụ usoro ọmụmụ nke ndị isi na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụlọ akwụkwọ steeti. Anyị na-atụ anya na ndị a ga-aga n'ihu ahịa site na njedebe nke 2019.
TRF nọgidere na ọnụnọ ya na agụmakwụkwọ gbasara mmekọahụ, nchebe na ntanetị yana mmata ihe ọmụma banyere mmata, na-aga nzukọ 10 na ihe omume na Scotland (afọ 12 gara aga). Na England ọ bụ 5 (afọ gara aga 3), yana otu onye na USA, Hungary na Japan.
N'ime afọ ahụ anyị na mmadụ karịrị 1,830 (afọ 3,500 gara aga) rụkọrọ ọrụ n'onwe anyị. Anyị nyefere ihe dị ka mmadụ 2,000 / awa nke nkwukọrịta na ọzụzụ, gbadaa site na 2,920.
Na Twitter na oge site na July 2018 ruo June 2019 anyị nwetara 195,000 tweet echiche. Nke a sitere na 174,600 n'afọ gara aga.
Na June 2018 anyị tinyere GTranslate na weebụsaịtị ahụ, na-enye nnweta zuru oke na ọdịnaya anyị n'asụsụ 100 site na ntụgharị igwe. Ndị ọbịa na-abụghị asụsụ Bekee mejupụtara ihe dịka 20% nke ntanetị weebụ anyị. Anyị na-agakwuru ndị na-ege ntị na Somalia, India, Ethiopia, Turkey na Sri Lanka.
N'ime afọ anyị bipụtara 34 blog posts na-ekpuchi ọrụ TRF na akụkọ kachasị ọhụrụ banyere mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ọha mmadụ. Nke a karịrị otu afọ gara aga. Anyị nwere otu isiokwu bipụtara na akwụkwọ akụkọ a na-enyocha ndị ọgbọ.
N'ime afọ TRF nọgidere na-apụta na mgbasa ozi, na-apụta na akụkọ akụkọ 12 na UK na mba ụwa (afọ 21 gara aga) yana BBC Alba na Scotland. Anyị gosipụtara na mkparịta ụka redio 6 (site na 4) wee nweta otuto na ihe nkiri TV banyere mmekọrịta ụmụaka.
Mary Sharpe gara n'ihu n'ọrụ ya dị ka onye isi oche nke Kọmitii Mmekọrịta Ọha na Nkwado na Society maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ (SASH) na USA. Na 2018 a họpụtara Mary dị ka otu n'ime WISE100 ndị inyom na-elekọta ụmụ mmadụ.
Foundationgwọ Ọrụ contributedgwọ nyere nzaghachi na nyocha Kọmitii Na-ahụ Maka Commons banyere uto nke Teknụzụ Immersive na Addictive. Na Scotland anyị nyere onyinye na National Advisory Council on Women and Girls na njikọ dị n'etiti iyi egwu mmekọahụ na ikiri ihe nkiri.
Anyị jigidere Royal College of General Practitioners Accreditation iji nyefee ndị ọkachamara ahụike ahụike otu ụbọchị maka mmemme mmemme ọkachamara ha na-aga n'ihu. A napụtara CPD noo na obodo 5 UK (site na 4) na ugboro abụọ na Republic of Ireland. E gosipụtara ndị ọrụ nkuzi abụọ ọzọ nke CPD ndị ọkachamara na USA.
TRF nọgidere na-emepụta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-eme ka a mara mmuta mgbasa ozi maka ụlọ akwụkwọ, ọkachamara na ọha na eze.
Anyị nyere ngụkọta nke awa 230 nke ọzụzụ n'efu na ngụkọta nke mmadụ 453. Nke a dị obere karịa afọ 1,120 nke afọ gara aga. Mgbanwe ahụ gosipụtara ntụgharị abụọ ejikọtara ọnụ n'ime ọrụ ebere. Nke mbu, anyi enweela ike ikwu maka otutu nkuzi azugara ndi okacha amara, ya mere imeziwanye ego anyi. Anyị nwere ike ime nke a, opekata mpe na akụkụ, n'ihi na a nwalere ma nwalee ihe ndị na-agagharị na afọ gara aga, na-eme ha ngwaahịa ndị ahịa bara uru.
Dika ihe eji ekwu okwu, anyi mere ka onu ogugu nke ozi a kesara site na uto anyi na ndi mmadu rutere na Scotland na uwa site na weebụsaịtị na mgbasa ozi mgbasa ozi, karia na redio. Onyinye anyị nye ndụmọdụ anọ ọha na eze na mbipụta anyị na Journal Mmekọahụ na Mmekọahụ emere n'efu. Isi mmalite bụ mmalite nke Ntuziaka Ndị Nne na Nna Na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet. Mpempe akwụkwọ dị mfe 4 a na-enyere ndị nne na nna aka gburugburu ụwa ugbu a.
Akwukwo akwukwo nke afo 2017-18
Ịzụlite ọzụzụ na mmepe mmepe iji bulite ọkwa ọkwa nke ndị òtù TRF iji hụ na ha nwere ike ịnapụta ụdị ọrụ ndị a
Anyị nọgidere na - eji ego 'Enwete na Echiche' site n'aka nnukwu ego Lottery iji zụlite ma nyochaa usoro ihe ọmụmụ maka ndị isi na ndị nkụzi nke ụlọ akwụkwọ nọ n'isi.
TRF nọgidere na-amụbawanye ọnụnọ ya na agụmakwụkwọ nwoke, nchebe weebụ na mgbasa ozi mara ọkwa, na-aga nzukọ 12 na ihe omume na Scotland (afọ gara aga 5), 3 na England (afọ gara aga 5) na 2 na USA nakwa otu na Croatia na Germany.
N'afọ ahụ, anyị na-arụ ọrụ karịa mmadụ 3,500 mmadụ ma nyefee gbasara 2,920 mmadụ / awa nke nkwurịta okwu na ọzụzụ.
Na Twitter na oge site na July 2017 ruo na June 2018, anyị nwetara 174,600 tweet impressions, site na 48,186 afọ gara aga.
Na June 2018 anyị gbakwunyere GTranslate na weebụsaịtị, na-enye ohere zuru ezu na ọdịnaya anyị na asụsụ 100 site na ntụgharị igwe.
N'afọ anyị wepụtara mbipụta 5 nke Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ na ndepụta nke nzipu ozi anyị wee ghọọ GDPR. N'afọ ahụ, anyị bipụtara 33 ihe nchọgharị blog na-ekpuchi ihe ndị TRF na akụkọ ọhụrụ banyere mmetụta nke ịntanetị na ọha mmadụ. Nke a bụ 2 karịa blọọgụ ka afọ gara aga. Anyị nwere otu isiokwu bipụtara na magazin a na-enyocha ndị ọgbọ.
Ihe ndị ọzọ rụpụtara
N'ime afọ TRF gara n'ihu na-apụta na mgbasa ozi, na-apụta na akụkọ NNNNX akụkọ na UK na nke ụwa (afọ gara aga 21) nakwa na telivishọn BBC na Northern Ireland. Anyi gosiputara na nyocha 9 redio.
Mary Sharpe nọgidere na-arụ ọrụ dị ka onyeisi nke Kọmitii Ọha na Ndị Na-ahụ maka Nkwado na Society maka Ọganihu nke Ahụike Mmekọahụ (SASH) na USA.
Onyinye Ụgwọ Ụgwọ ahụ nyere aka na nzaghachi na UK's Internet Safety Strategy Green Paper Consultation. Anyị mekwara ntinye aka na Team Safety Strategy Team na Ngalaba maka Digital, Culture, Media and Sport na mmemme a ga-atụgharị anya na Iwu Digital Economy.
Anyị nwetara Royal College nke General Practitioners nzere ntozu iji nyefee ndị ọkachamara nlekọta ahụike otu ụbọchị maka usoro mmemme ha na-aga n'ihu. A na-ewepụta ụlọ akwụkwọ CPD na obodo 4 UK.
TRF nọgidere na-emepụta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-eme ka a mara mmuta mgbasa ozi maka ụlọ akwụkwọ, ọkachamara na ọha na eze. Anyị na-akwado nkwado ihe omume nke ụlọ akwụkwọ maka Wonder Fools Nsogbu Coolidge na Ụlọ ihe nkiri Traverse.
Onye isi ochichi anyị na oche anyị na-aga ezi ọzụzụ nkuzi na Edinburgh n'elu 3 ụbọchị.
Anyị nyere ngụkọta nke 1,120 mmadụ / awa nke ọzụzụ n'efu, naanị dị n'okpuru 1,165 gara aga. TRF wepụtara ọzụzụ n'efu na ọrụ ozi na ndị na-esonụ:
Anyị nyere ndị nne na nna 310 na ọkachamara na mpaghara dị iche iche, si na 840 gara aga
Onye isi oche na-eme n'ihu ndị 160 na ndị na-ege TV na BBC Northern Ireland. A na-agbasa usoro nke 10 nke dị na ngosi Nolan, usoro kachasị elu na Northern Ireland
Anyị nyere ndị 908 ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na nzukọ na ihe omume dị na Scotland, England, USA, Germany na Croatia, malite na 119 gara aga
Anyị nyere otu ụlọ ọrụ afọ ofufo maka nwa akwụkwọ mahadum ma kelee otu ụdị ihe omume mara mma nke na-agụnye 15 undergraduates na ihe omimi zuru ezu.
Akwukwo akwukwo nke afo 2016-17
Na February 2017, anyị nwetara £ 10,000 'itinye ego n'echiche' site na nnukwu ego Lottery iji zụlite ihe ọmụmụ maka ndị isi na ndị nkụzi nke ụlọ akwụkwọ.
Site na 1 June 2016 ka 31 May 2017 ụgwọ nke CEO bụ onyinye site na Onyinye Millennium Awards nke UnLtd 'Mee It' nke £ 15,000 nke a na-akwụ ya n'onwe ya.
Mary Sharpe kwụsịrị ọrụ ya dịka onye nleta nleta na Mahadum Cambridge na December 2016. Mmekọrịta ya na Cambridge na-akwado mmepe nke profaịlụ nchọpụta nke TRF.
Onye isi oche na oche ahụ gụchara usoro mmemme Accelerated Social Innovation Incubator Award (SIIA) nke ọzụzụ azụmaahịa azụmaahịa na Gbasaa.
TRF nọgidere na-amụbawanye ọnụnọ ya na agụmakwụkwọ nwoke, nchebe weebụ na mgbasa ozi mara ọkwa, ịga nzukọ 5 na ihe omume na Scotland, 5 na England na ndị ọzọ na USA, Israel na Australia. Tụkwasị na nke ahụ, e bipụtara akwụkwọ edemede atọ nke ndị ọhụụ dere nke ndị òtù TRF bipụtara na magazin agụmakwụkwọ.
Na Twitter na oge site na July 2016 ruo June 2017 anyị mụbara ọtụtụ ndị na-eso ụzọ site na 46 ruo 124 ma zitere 277 tweets. Ha nwetara 48,186 tweet impressions.
Anyị kwagara na ebe nrụọrụ weebụ www.rewardfoundation.org gaa na ọrụ ohu ọhụụ na-eme ka ọganihu dịwanye elu maka ndị ọrụ abụọ na ọha mmadụ. Na June 2017, anyị kwalitere inye ụgwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ nke anyị na-achọ ibipụta ma ọ dịkarịa ala 4 ugboro kwa afọ. N'afọ ahụ, anyị bipụtara 31 blog posts na-ekpuchi ọrụ TRF na akụkọ ọhụrụ banyere mmetụta nke ịntanetị.
Ihe ndị ọzọ rụzuru
N'ime afọ TRF malitere ịpụta na mgbasa ozi, na-egosi na akụkọ NNNNX akụkọ akụkọ na UK nakwa na telivishọn BBC na Northern Ireland. Anyị na-agba ajụjụ ọnụ na redio zuru oke na vidio nke Intanet na-ebipụta.
Mary Sharpe co-dere otu isi isiokwu Ụdị Igwe Ịntanetị na Mmegharị Mmekọahụ na Steve Davies maka akwụkwọ bụ 'Na-arụ ọrụ na Ndị Kwere Mmekọahụ: Nduzi maka Ndị Ọrụ'. Routledge bipụtara ya na March 2017.
Mary Sharpe ghọrọ onyeisi nke Kọmitii Na-ahụ Maka Ọha na Ndị Nlekọta na Society maka Ọganihu nke Ahụike Mmekọahụ (SASH) na USA.
Ụgwọ Ụgwọ ahụ nyere ntụrụndụ ndụmọdụ maka atụmatụ Scotland maka igbochi ma kpochapụ ihe ike megide ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ, ọdịnihu nke usoro ọmụmụ nke onwe na nke mmekọahụ na ụlọ akwụkwọ Scottish na nnyocha ndị Canada na-ahụ maka mmetụta ahụ ike nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eme ndị na-eto eto.
E depụtara Foundationgwọ Ọrụ asgwọ dị ka ihe enyemaka nwere njikọ na ebe obibi anyị na Atụmatụ Atụmatụ Mba na Nchedo Internetntanetị maka Childrenmụaka na Ndị Na-eto Eto nke Ọchịchị Scottish bipụtara. Anyị nyere aka na Ndị Ọrụ Ndị omebe iwu UK na Family, Lords na Commons Family & Child Protection Group na-agba mbọ iji nyere aka na ntinye nke Digital Economy Bill site na ndị omeiwu UK.
Anyị nyere ngụkọta nke ọzụzụ 1,165 awa n'efu, site na 1,043 afọ gara aga. Anyị na-enye ọrụ ọzụzụ na ọrụ ozi na ndị na-esonụ:
Ụmụ akwụkwọ 650 n'ụlọ akwụkwọ dị na Scotland
Ndị nne na nna 840 na ọkachamara dị iche iche
Ndị 160 nọ na-ege ntị na TV na BBC Northern Ireland. A na-agbasa usoro nke 10 nke dị na ngosi Nolan, usoro kachasị elu na Northern Ireland
119 na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na nnọkọ na ihe omume na Scotland, England, USA na Israel
Anyị nyere ndị ọrụ afọ ofufo 4 maka ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ mahadum.
Akwukwo akwukwo nke afo 2015-16
Imeziwanye ego nke ọrụ ebere ahụ site n'itinye onyinye na ịmalite ahia azụmahịa
Inwe mmekorita na ndi oru aka na ndi Scotland site na netwọk
Ịmepụta usoro ihe nkuzi maka ụlọ akwụkwọ na-eji ihe omumu sayensi nke circuitry of the brain and how it interacts with the environment
Ịmepụta profaịlụ mba na nke ụwa iji mee ka TRF bụrụ ihe a kwadoro 'nzukọ na-aga' maka ndị mmadụ na òtù dị iche iche na-achọ nkwado na ebe ịntanetị na-emerụ ahụ dị ka ụzọ isi kwalite nghọta ọha na eze banyere mgbidi ụlọ nrụgide
Ịgbasawanye weebụ anyị na mgbasa ozi ọha na eze iji wuo ika anyị n'etiti ndị na-ege ntị na Scotland na gburugburu ụwa
Emere ihe ịga nke ọma na UnLtd maka onyinye “Mee ya” nke £ 15,000 iji kwụọ ụgwọ Mary Sharpe ụgwọ maka otu afọ site na June 2016. Nsonaazụ na Mee 2016 Meri gbara arụkwaghịm dịka onye na-elekọta ụlọ ọrụ ebere ma gbanwee ọrụ nke Chief Onye isi ọrụ. Dr Darryl Mead hoputara site na ndi Board dika oche ohuru.
Mary Sharpe duziri ọrụ iji zụlite netwọk ndị nwere ike ime ihe. E nwere nzukọ ndị nnọchiteanya nke Positive Prisons, Positive Futures ?, Scottish Catholic Education Association, Lothians Health Sexual, NHS Lothian Health Respect, Edinburgh City Council, Scottish Health Action on Alcohol Problems and the Year of Dad.
A họpụtara Mary Sharpe ka ọ bụrụ onye nleta nleta na Mahadum Cambridge na December 2015. A họpụtara Darryl Mead dịka Onye Mmekọrịta Nlekọta Mgbasaozi na UCL. Mkpakọrịta na mahadum ndị a kwadoo mmepe nke profaịlụ nchọpụta TRF.
Mary Sharpe gụchara ọzụzụ ya site na Program Innovation Incubator Award (SIIA) na The Melting Pot. O sonyeere usoro ihe omume Accelerated SIIA, ya na onye òtù Board bụ Dr Darryl Mead.
Ihe ndị a rụpụtara n'èzí
TRF mepụtara ọnụnọ na ogige nchedo weebụ ma na-emetọ ubi, gaa na nzukọ 9 UK.
Edere akwụkwọ ndị ndị òtù TRF dere maka ngosi na Brighton, Glasgow, Stirling, London, Istanbul na Munich.
Na February 2016, anyị bidoro Twitter feed @brain_love_sex wee gbasaa weebụsaịtị ahụ site na 20 gaa na 70 ibe. Anyị na-ewepụkwa ebe nrụọrụ weebụ ahụ site na ndị mmepe.
Mary Sharpe co-dere otu isi isiokwu Ụdị Igwe Ịntanetị na Mmegharị Mmekọahụ na Steve Davies maka akwụkwọ bụ 'Na-arụ ọrụ na Ndị Kwere Mmekọahụ: Nduzi maka Ndị Ọrụ'. Ọ ga-ebipụta Routledge na February 2017.
A họpụtara Mary Sharpe na Board nke Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọrịta Ahụ (SASH) na USA.
TRF weghaara azịza nke Ụlọ Akwụkwọ Ahịa nke Australian n'ime Emere ụmụaka ndị Australia aka ọjọọ site na ịnweta foto ndị gba ọtọ na Intanet na ịga gọọmentị UK Nwa Nchebe Ụmụaka: Nkwenye afọ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Anyị malitere ịmalite ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-emerụ ọzụzụ maka mgbasa ozi maka ụlọ akwụkwọ ndị Scottish na azụmahịa.
TRF natara ego 2,500 ka ọ bụrụ onyinye mkpụrụ maka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ndị ntorobịa. A ga-ejikọta ya na ndị na-eto eto ndị na-ege ntị.
Anyị nyere ngụkọta nke ọzụzụ 1,043 awa n'efu, site na 643 afọ gara aga.
Anyị na-enye ọrụ ọzụzụ na ọrụ ozi na ndị na-esonụ:
Ndị nkụzi 60 na-enye ọzụzụ na-arụ ọrụ maka Edinburgh City Council
Ndi 45 ndi oru ahuike nke NHS Lothian
Ndị na-eme ihe nkiri 3 maka Wonder Fools na Glasgow
Ndị òtù 34 nke National Association for Treatment of Abusers
Ndị 60 na-abịa na onlineProtect Conference na London
Ndị 287 na-ezigara na International Congress of Technology Addiction na Istanbul, Turkey
Ndị na-ese akwụkwọ 33 na ụmụ akwụkwọ nkà ihe osise na Royal College of Art na London
Ndị òtù 16 nke ikpo ọkụ ahụ, tinyere Dr. Loretta Breuning
Ndị ọrụ 43 nọ na Health Chalmers Sex Centre na Edinburgh
Ndi 22 biara na DGSS Conference na Social Scientific Sexuality Research na Munich, Germany
Ụmụ akwụkwọ 247 na ụlọ akwụkwọ George Heriot na Edinburgh Anyị nyere ụlọ ọrụ afọ ofufo 3 maka ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ mahadum.
Akwukwo akwukwo nke afo 2014-15
Meri Sharpe na Darryl Mead mepụtara usoro ihe atụ nke ndị na-ege ntị na-akọwapụta ụzọ ọrụ ụbụrụ nke ụbụrụ na-arụ. Nke a na-enyocha usoro ahụ riri ahụ, kọwapụtara ihe ndị dị n'elu ma kọwaa ụzọ nke ịntanetị nwere ike isi ghọọ ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ka edepụtara n'okpuru. Mary Sharpe kwuru banyere ndị ọrụ 150 na-arụ ọrụ maka Gọọmenti Scotland.
Ndị Board kwetara iwu.
Ndị Board kwetara na ndị na-ahụ maka ọrụ.
Mgbe ahụ Board kwetara atụmatụ azụmahịa.
Ejiri Akaụntụ Banyere ego nke onye na-ere akụ na ụlọnga isi ego Scottish.
A nabatara njirimara ụlọ ọrụ mbụ na logo.
A kwadoro nkwekọrịta maka ụgwọ nke akwụkwọ ahụ Brain gị na Porn: Internet Pornography na Science Emerging of Addiction ka onye chepụtara ya nye onyinye maka ụgwọ ọrụ. A natara ụgwọ mbụ nke eze.
Mary Sharpe dị ka oche meriri ebe na Social Innovation Incubator Award (SIIA) usoro ọzụzụ na Melting Pot. Ihe nrite ahụ gụnyere otu afọ nke enweghị ohere ịgbazinye ego na ite agbaze.
Mary Sharpe meriri £ 300 maka Ụlọ Ọrụ Ụgwọ Ọrụ na SIA.
Mary Sharpe rịọrọ ma merie onyinye nke £ 3,150 na ọkwa 1 site na FirstPort / UnLtd iji nye anyị ohere iwulite weebụsaịtị dị mma. Enwetaghị ego site na onyinye a ruo n'afọ ego na-esote.
A na-emepụta ụlọ ahịa na-ere ahịa iji zụlite ebe nrụọrụ weebụ na ihe ndị ọzọ na-emepụta nke ọma.
Anyị nyere ngụkọta nke ọzụzụ 643 awa n'efu.
Anyị zụrụ ndị ọkachamara na-esonụ: ndị ọrụ ahụike mmekọahụ rụrụ arụ nke 20 maka NHS Lothian, ụbọchị zuru ezu; Ndị ọkachamara ahụike 20 na Lothian & Edinburgh Abstinence Programme (LEAP) maka awa 2; 47 ndị omekome na-ahụ maka ikpe mpụ na Scottish Association maka Ọmụmụ nke Mmejọ maka awa 1.5; Ndị nlekọta 30 na Polmont Young Offenders Institution maka awa 2; 35 ndị ​​ndụmọdụ na ndị ọkachamara n'ichebe ụmụaka na ngalaba nke Scottish nke National Association for the Treatment of Abusers (NOTA) maka awa 1.5; Mụ akwụkwọ 200 dị isii na George Heriot's School maka awa 1.4.
Anyị nyere ndị ọrụ afọ ofufo 3 maka ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ mahadum.